Isithethe sokutya seSikh seLangar
Unqulo & Umoya ISih Life & Culture
Ixabiso elilungileyo kakhulu liNzuzo yoNcedo lokuziNgca
Xa wokuqala uSikh guru uNanak Dev waba ngumdala, uyise wamnika ama-rupees angama-20 waza wamthuma kwintengiso. Uyise watshela unyana wakhe ukuba inzuzo efanelekileyo yenza inzuzo. Endleleni yakhe yokuthenga iimpahla, uNanak wadibana neqela labadaka abahlala ehlathini. Waqaphela imeko ephazamisekileyo yabantu abangcwele bahamba kwaye wagqiba kwelokuba inzuzo enkulu enokuyenza kunye nemali kayise yayiza kubondla nokugqoka i-sadhus elambileyo.
UNanak wasebenzisa yonke imali ayenayo ukuthenga ukutya nokupheka amadoda angcwele. Xa uNanak wabuyela ekhaya engenanto, uyise wamgweba kakhulu. U-First Guru Nanak Dev wagxininisa ukuba inzuzo yokwenene iya kuba nenkonzo engenanto. Ngokwenza njalo wabeka inqununu yesiseko se langar.
Apho i-gurus ihamba khona okanye ibambe inkundla, abantu babuthene ndawonye ukuze babelane. U-Mata Khivi, umfazi we-Second Guru Angad Dev, uqinisekisile ukubonelela nge-langar. Wathatha inxaxheba ekwenzeni ukuhambisa ukutya okukhululekileyo kwibandla elilambileyo. Iminikelo yoluntu kunye nemigudu edibeneyo yabantu baye banceda ukulungiselela ikhishi ekhululekile ekhishini ngokusekelwe kwiinqununu zeemithetho ezintathu zegolide zesiSikhism :
I-Kirat karo - Yenza uphila ngokuthembeka.
Vand chakko - Khonze abanye kwaye wabelane ngokutya.
U-Naam japna - Khumbula igama likaThixo ngexesha lonke ukuthanda ukupheka, ukuhambisa i-langar, okanye ukucoca.
I-Guru Guru i-Amar Das ifomene neziko le langar. Ikhishi elikhululekile lekhishi lihlangene namaSikh ngokuseka ezimbini iingcamango eziphambili:
I-Pangat - Yonke inzala yintsapho enye nantoni na i-caste, umbala, okanye inkolo. Bonke bahlala ndawonye emigqabeni emigqeni kwimigca, benza imiqolo ngaphandle kokucalula, ukuqwalaselwa kweso sikhundla, okanye isikhundla.
I-Sangat - Abaqhenqileyo abazinikeleyo bathonya abanye ukuba banqwenele ukuphila ngokunyanisekileyo. Hlanganisa nenkampani enomqondo ofanayo ngenjongo yokubiza igama likaThixo omnye phambi koMbutho.
Zonke i-gurdwara kungakhathaliseki ukuba uthobekile, okanye indlela enhle ngayo, ineziko langar. Naliphi inkonzo yaseSikh, ingaba ibanjwe ngaphakathi okanye ngaphandle, inommandla obekelwe eceleni ukulungiselela kunye nenkonzo ye langar. Indawo ye langar ingahlukaniswa yesikrini esilula okanye ivalwe ngokupheleleyo kwindawo yokunqula. Ingaba ulungele ekhitshini elivulekileyo, indawo ehlukanisiweyo yekhaya, okanye i-complex gurdwara eyinkqutyana eyenzelwe ukukhonza amawaka, i-langar ineemeko ezihlukeneyo ngokubanzi:
Ukugcinwa kwempahla yesevisi.
Inkonzo yokutya okulungiselelwe.
Ukuhlala kwindawo yokutya.
Ukuhlamba iimpahla ezisetyenzisiweyo.
Umzekelo weLangar noSeva (iNkonzo yokuzithandela)
Inzuzo yekhishi ekhululekile ekhitshini ekunceliseni umzimba kunye nokunyusa umoya womphefumlo. Ikhitshi ye langar isebenza ngokupheleleyo ngeSeva ngokuzithandela inkonzo. I-Seva yenziwa ngaphandle kokucinga ukuba ihlawulwe okanye ifumana nayiphi na indima yembuyekezo. Nsuku zonke amashumi amawaka abantu bavakashela iHarmandir Sahib , iThempile yegolide e-Amritsar, eIndiya.
Ngamnye umvakatye wamkelekile ukuba adle okanye ancedise ekicini elikhululekile. Ukutya okukhoyo kuhlale kutyalwa imifuno, akukho maqanda, intlanzi, okanye inyama yaluphina uhlobo. Zonke iindleko zixutywe ngokupheleleyo ngeminikelo yokuzithandela evela kumalungu ebandla.
Amavolontiya athabatha uxanduva kubo bonke ukulungiselela ukutya nokuhlambulula oku:
Hlanganisa i- atta intlama kwiimishini ezifunekayo imihla ngemihla ukuqikelelwa kuma-50,000-80,000 ukulungiselela i-roti, uhlobo lwesonka esicatyambo.
Phuma i-roti ngesandla bese uyipheke kwiiplati zensimbi ezishushu.
Sika kwaye ucoce anyanisi, iziqholo kunye nemifuno.
Ubilise iintlobo zeesobho.
Nokwabela ukutya kubakhonzi abadla ukudlala ecaleni kwicala.
Geza amawaka eetyhidi zetsimbi kunye neepuni, qaphela ukulahlwa kwayo yonke inkunkuma, kwaye uhlambuluke ekhitshini nakwihholo lokudlela.
Ingaba i-Marijuana yonyango ilungele iikhikh?
AmaShm Funeral Hymns, Imithandazo kunye neendinyana
Isingeniso kwisigqoko semveli saseSikhs
Ukutya kwamaVilanari kunye neeRibheka kwiKhidi yamahhala yeGugu
I-khalenda yoMnyaka we-Nanakshahi 548 Iimviwo ze-Gurpurab zamazwe ngamazwe 2016 - 2017
Kutheni AmaKikhi Agqoka iTurbans?
Konke malunga neGurdwara indawo yoNqulo lweeSikhs
Ngaba i-Sikhs ikholelwa ekusokeni?
Yonke Imayelana neSikh Wedding Wedding and Customs Customs
Anand Karaj Sikhism Wedding Ceremony Guide
Iimifanekiso eziphezulu ze-DVD ze-Animated Ngomlando we-Sikh nge-Vismaad IiFilimu
IMfazwe Yehlabathi II, iWordwords, kunye neMifanekiso yeMbala
Izizathu ezili-10 eziphezulu zokudlala iThenyi yeTable
Ukuqonda Inkcazo yamaSulumane ethi 'Jihad'
Indlela yokusebenzisa ibhobho ye-Bug ngokuphepha
Iingqungquthela ezibi kakhulu zehlabathi
Usuku loPhuculo lweSuku lomhlaba
ISt. University of Gregory's Admissions
Inkcazo echanekileyo yokuchaza kunye nemizekelo
I-University of La Salle iGPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iintsuku ezingama-40 zeentente zibalwa njani?
Ukwakhiwa kweBridge eBrooklyn Kwiimifanekiso zamaVintage
I-Simpsons Iya ku-intanethi -Internet kunye neMidiya yoLuntu kwi-Springfield
I-Biography kaSir Sandford Fleming (1827-1915)
Imfazwe Yehlabathi I / II: USS Arizona (BB-39)
Iimfuno ezisemgangathweni ye-NHL's Agent System System
Ukungafani kunye nokuPhambuka okuMgangatho
Iingoma eziphezulu nge-Casting Crowns
'I-Gray's Anatomy' Inkathi yesi-5 Isiqendu
I-Chang'an, iChina - I-Capital, i-Han, i-Sui ne-Tang Dynasties
Ngaba Ixabiso LeSikolo Sifaneleke?
Ukuqonda Ukusetyenziswa kweziPhuculo zeSpeyin
Uxhumano phakathi kwe-ET kunye ne-Star Wars
UKumkani uHerode Omkhulu: UMlawuli onamahloni wamaYuda
Fumana i-Mistake-Present Present or Present present
Imizekelo yabaSebenzi kunye nabashumayeli
Yintoni i-Radioactivity? Yintoni iRadioation?
Inkcazo yePragmatic atheists